Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Aaron Ramsdale Child Story Plus Ihe Na -adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Aaron Ramsdale Biography na -agwa gị akụkọ gbasara akụkọ nwata ya, ndụ nwata, nne na nna (Nick na Caroline), ezinụlọ na ụmụnne (Edward na Oliver). Na mgbakwunye, Aaron Ramsdale's Web, Ndụ Onwe Onye na Net Worth.
Na nkenke, ihe ncheta a nwere Life History of a Fast rise Goalie. Ọjụjụ ọ jụrụ mgbe ọ bụ nwata kpaliri ọchịchọ ya ugbu a ịga nke ọma. Anyị na -amalite akụkọ Ramsdale site n'oge ọ bụ nwata (dịka a hụrụ ebe a) ruo oge ọ nwetara ama.
Sead Kolasinac Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ
Aaron Ramsdale dị ka nwatakịrị - ọ mara mma nke ukwuu.
Iji kpalie agụụ ịgụ akụkọ ọdịbendị gị na ụdị nke Aaron Ramsdale's Bio, Lifebogger lere anya na ọ dị mkpa igosipụta mmalite ndụ ya na ịrị elu osisi. Lee ọnọdụ ndụ Erọn.
Aaron Ramsdale Biography - Lee ndụ nwata ya na ịrị elu osisi.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ tachiri obi na mgbasa ozi 2020/21 na -ekwekọghị ekwekọ - nke butere Sheffield United ịta nhapụ. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị na -akwado Arsenal enweghị mmasị na mkpebi klọb ha ịbanye ya maka nde £ 30 - nke ha na -ewere dị ka nke ukwuu maka onye mgbaru ọsọ nkịtị.
N'ihi nke ahụ, ụfọdụ ndị egwu Gunners zoro mkparị na akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta ya. N'agbanyeghị adịghị ike, anyị hụrụ akụkụ dị mma nke ọrụ ya. N'ikwu nke a, anyị ghọtara na ọ bụ mmadụ ole na ole gụrụ Aaron Ramsdale's Biography. Ugbu a, n'atụghị egwu, ka anyị kpughee akụkọ ndụ ya.
Akụkọ Aaron Ramsdale:
Maka ndị mbido Biography, ọ na -ebu aha otutu - Ramsey. A mụrụ Aaron Christopher Ramsdale n'ụbọchị 14th nke May 1998, nne ya, Caroline Ramsdale na nna, Nick Ramsdale. Ebe amụrụ ya bụ Stoke-on-Trent, obodo dị na etiti England.
Aaron Ramsdale bụ onye ikpeazụ ezinụlọ ya mụrụ - nke ụmụ nwoke mejupụtara. Ụmụnne niile bịara n'ụwa - ekele maka njikọ alụmdi na nwunye na -enye ọ betweenụ dị n'etiti nne na nna ha. Ịhụnanya ịhụnanya Caroline na Nick nwere maka nwa ha nwoke enweghị atụ. Lee nne na nna Aaron Ramsdale.
Zute nne na nna Aaron Ramsdale-nne ya, Caroline na nna yiri, Nick Ramsdale.
Ọkachamara onye mgbaru ọsọ nọrọ ụbọchị nwata ya na ụmụnne ya ndị okenye abụọ -Edward na Oliver. Ụmụnne Aaron ndị okenye nwere nnukwu ọrụ. Ọbụna ruo taa, Edward na Oliver (nke dị n'okpuru) anaghị ekwe ka obere nwanne ha nwoke na -awagharị n'ọchịchịrị naanị.
Zute ụmụnne nwanne Aaron Ramsdale - Edward na Oliver.
Caroline na Nick (nne na nna ya) zụlitere Erọn na ụmụnne ya n'ime obodo Chesterton. Dịka esi hụ na maapụ, nke a bụ njem nkeji iri site na ebe amụrụ ya-Stoke-on-Trent.
Ryan Fraser Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Maapụ na -egosi Chesterton - ebe nne na nna Aaron Ramsdale zụlitere ya.
Mgbe ọ bụ nwata, obere Erọn nwere mmasị dị ukwuu n'egwuregwu bọọlụ - ọkachasị ihe mgbaru ọsọ. N'ịbụ onye agụụ egwuregwu ahụ kpaliri, nwata ahụ mere ka ọ bụrụ chi nke otu n'ime ndị na -eche nche na England kachasị elu - Ben Foster. N'akụkụ akụkọ akụkọ ahụ, ọ nwere mmasị dị ukwuu maka West Bromwich Albion.
Obere Erọn mere arụsị Ben Foster dị ka nwatakịrị.
Ezinụlọ Ezinụlọ Aaron Ramsdale:
Site n'ihe anyị gbakọtara, nne na nna Goalie, Caroline na Nick, bụ ndị enyi na ndị na -anaghị achọ naanị ọdịmma onwe ha.
Na -enweghị ajụjụ, ịhụnanya Caroline na Nick gosipụtara nwa ha nwoke Erọn - enyerela ya aka igwu mmiri n'ime apịtị apịtị. Lee ndị hụrụ n'anya - n'oge ọchị ha.
Ị nwere ike ịkpọ ha ndị nkịtị. Caroline na Nick abụwo ezigbo enyi ibe ha site n'ụbọchị mbụ.
Ndị nne na nna Aaron Ramsdale nwere akụkọ egwuregwu. Papa ya, Nick, bụ onye na -eme mkpọtụ 400m. Ọ gbara ọsọ ugboro abụọ maka Great Britain na mmemme mba ụwa.
N'aka nke ọzọ, nne Aaron Ramsdale bụ onye ọrụ ịgba bọọlụ lara ezumike nka. Dị ka di ya, ya na England nwekwara ọnwụnwa.
N'ezie, inwe ezinụlọ nwere obi ụtọ dị ka ịnata eluigwe mbụ. Ezinụlọ Aaron Ramsdale bụ nnwale nnwere onwe.
Foto dị n'okpuru bụ ndị na -ewetara ya ọ joyụ kachasị. Ka ha nọ n'akụkụ ya, Erọn nwere ike imeri ọjụjụ - site na Bolton (lee akụkọ n'okpuru).
Maka Onyenchekwaebumnobi, inwe ndị a na ndụ ya dị ka ịnweta eluigwe mbụ.
Mmalite Ezinụlọ Aaron Ramsdale:
Ọ bụ eziokwu - na Onyenchekwaebumnobi a bụ onye mba Briten site n'ọmụmụ. N'ihe gbasara agbụrụ, Ramsdale bụ nke ndị otu White Britain. Ndị sitere na agbụrụ agbụrụ a bụ ọnụ ọgụgụ kacha n'ọnụ ọgụgụ ndị bi na England - (80.5%).
Ọ bụrụ na ịmaghị, ebe ezinụlọ Aaron Ramsdale si bịa, (Stoke-on-Trent) bụ obodo dị na etiti England amaara maka ụlọ ọrụ ọkpụite. Obodo Aaron Ramsdale bụ ụgbọ ala 1 hr 5 ruo Birmingham yana ụgbọ ala 1 hr 24 gaa Manchester.
Chesterton bụ obere obodo nwere oke obodo Stoke-on-Trent. Anyị na -ekekọta ezinụlọ Aaron Ramsdale na obere ụlọ a na -egwupụta akụ - nke nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ 7,421 (ọnụ ọgụgụ 2011). Echefula, nke a bụ ebe England Stopper nọrọ oge ọ bụ nwata.
Aaron Ramsdale Mmụta na Nrụpụta Ọrụ:
N'ihi ezigbo ntọala ha n'egwuregwu, Caroline na Nick kwadoro agụmakwụkwọ zuru oke maka ụmụ ha. Ọ bụ ụdị ụlọ akwụkwọ nke gụnyere ntolite mmadụ - ma uche ma ahụ site na egwuregwu.
Nwa akwukwo nke Arsene Wenger Akụkọ nke oma
Na 2016, Nick Aaron Ramsdale Nick kọwara Sentinel (akwụkwọ akụkọ obodo) na nwa ya nwoke malitere ịmụ ihe mgbaru ọsọ mgbe ọ dị afọ asaa na ọkara. Otu nwoke, nke aha ya bụ Keith Griffiths kwesịrị ka enwe nnukwu aha na Biography a.
Nke a bụ n'ihi na ọ gbara ndị nne na nna Aaron Ramsdale ume ka nwa ha nwoke gaa ụlọ akwụkwọ mgbaru ọsọ Fred Barber. Ọbụna dị ka nwata (na -achọ ịghọ ọkachamara), Aaron nọgidere na -agụ akwụkwọ.
Ramsdale gara ụlọ akwụkwọ sekọndrị Sir Thomas Boughey - ebe ọ kacha nwee egwuregwu bọọlụ. Na 2014, ụlọ ọrụ mgbasa ozi Bekee kọwara ya dị ka atụmanya mgbaru ọsọ n'ọdịnihu. Nke a bịara mgbe o nyechara ụlọ akwụkwọ ya aka iru asọmpi FA Cup nke Slọ Akwụkwọ Bekee. Ndị a bụ ndị nwunye ya.
Mmụta Aaron Ramsdale - AKPARA. Anyị na -ahụ ka ya na ndị otu ya na -ekpori ndụ.
Akụkọ Aaron Ramsdale Football:
Na -akwado ụlọ akwụkwọ mgbaru ọsọ Fred Barber, Goalie na -achọsi ike nwekwara ọrụ ịga nke ọma na Marsh Town. Nke a bụ agụmakwụkwọ dabere na Newcastle-n'okpuru-Lyme nke na-eji ndị nkuzi ikikere UEFA B nyefee oge ọzụzụ ha.
N'ụlọ akwụkwọ Marsh, Aaron Ramsdale nwere mmasị n'ụlọ akwụkwọ na mmemme Football Academy. Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ahụ, nke Mr Stuart Farlow na -eduzi, na -enye ụmụ akwụkwọ ya ohere pụrụ iche ịgbaso nrọ ha site na usoro ọmụmụ bọọlụ.
Aaron Ramsdale na Marsh Town-ụzọ laghachi na 2008. Ụmụ nwoke sitere n'ahịrị azụ-(n'aka ekpe gaa n'aka nri) gụnyere; Jack Lehan, Richard Ryder, Jack Millington, Aaron Ramsdale, Callum Lovatt na Isaac Springett. Ụmụ nwoke sitere n'ahịrị dị n'ihu (n'aka ekpe gaa n'aka nri): Tom Morgan, Conah Maidment, Daniel Griffiths na Tom Flattley.
Njem na Bolton:
Onye ọ bụla na -agba bọọlụ na Marsh Town nwere nrọ igwu egwu na klọb buru ibu. Mgbe ya na Marsh Town rụchara nke ọma, nne na nna Aaron Ramsdale mere ka ọ debanye aha ya na agụmakwụkwọ Bolton.
Ndebanye aha ịga nke ọma n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ sitere na nkwanye sitere na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Ramsdale gara aga - ụlọ akwụkwọ mgbaru ọsọ Fred Barber. N'oge ọ sonyeere Bolton, agụmakwụkwọ nwere nnukwu kpakpando dị ka nke Liverpool n'ọdịnihu Nke Nat Phillips.
Ị hụla ihe dị na foto dị n'okpuru? Ọ bụ eziokwu na ndị na -eche nche (Aaron Ramsdale na onye otu ya) bụ ndị kacha mkpụmkpụ n'ime ndị otu ahụ. Maka enweghị oke achọrọ maka onye na -eche nche, ọ bịara doo anya na Erọn nwere nsogbu ito eto.
Igosipụta mkpumkpu karịa ndị ọrụ ibe ya pụtara nsogbu.
Akụkọ ọjụjụ Aaron Ramsdale:
Maka na ọ mezughi oke achọrọ maka onye na -eche nche, nwata nwoke ahụ dara ogbenye kwụrụ ụgwọ ahụ. Ụlọ akwụkwọ Bolton Wanderers tọhapụrụ ya - n'oge ọ kacha chọọ ha. N'ikwu okwu banyere akụkọ ọjụjụ ya, Erọn gwara ndị nta akụkọ AFC Bournemouth;
Mgbe m dị afọ iri na ụma, Bolton tọhapụrụ m. Ha kwuru na m dị obere ma enweghị m ike ịgba.
N'oge ahụ, ha kwuru eziokwu, mana ha enyeghị m ohere ito eto.
Klọb ole na ole ndị ọzọ lere nha m anya wee sị mba.
Enwere m afọ ise na Bolton na ha - ịhapụ m na football siri ike iwere.
Ọ bụ ezie na ịchụso ịdị ukwuu nke Ramsdale ezutewo ihe mkpọbi ụkwụ, ọjụjụ Bolton emerighị ya. Onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya - Caroline (nne ya), Nick (nna ya), Oliver na Edwards (ụmụnne ndị okenye) kasiri ya obi. Daalụ maka nke ahụ, nwa ha nwoke gakwara n'ihu.
Bukayo Saka Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Ezinụlọ na -akwado Aaron Ramsdale nyere aka mee ka nsogbu ahụ belata. Site na nke ahụ, ọ chịkọtara obi ike iji gaa n'ihu na -enwe agụụ. N'ime oge ahụ, obere Erọn gara nri na ihe mgbakwunye iji gbochie nsogbu uto ya.
Aaron Ramsdale Biography - Ụzọ ama ama Akụkọ:
Na mbu, Huddersfield na Sheffield United gbara ya akwụkwọ - n'ebumnuche nke ịnabata ya n'ụlọ akwụkwọ ha. N'ịchọ ngọzi nne na nna ya, nwata ahụ sonyeere Sheffield site na mmemme agụmakwụkwọ. Blades meriri ndị mgba Yorkshire Huddersfield iji nweta mbinye aka ya.
Shkodran Mustafi Childhood Story Plus Ihe Na-emeghi Ihe Ozo
Ramsdale, mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ Sheffield United, gara n'ihu na nkuzi ya na klọb ahụ. Mgbe ọ ghọchara onye mgbaru ọsọ ọkachamara, onye nnọchi anya ya (World in Motion) kwetara ịhazi ya ụzọ doro anya.
Na mbido, kpakpando Sheffield United pụtara na ya Nke Chris Wilder otu nwere kpakpando na -abịa dịka John Lundstram. Nke a bụ tupu o kwenye na ọ ga -esonye klọb ọzọ site na mbinye ego. Gburugburu afọ ahụ - 2016, Aaron Ramsdale emeriela ihe isi ike ya dị elu.
Maka ọ joyụ nke ezinụlọ ya, nwa ha nwoke nwetara ọkwa nkezi mgbaru ọsọ nke 6.2 ụkwụ - n'ime ọnwa ole na ole ọ hapụrụ ụlọ akwụkwọ. N'ịgbaso mgbake dị elu, ihe niile Ramsdale bu n'uche bụ igosi na ndị nwere obi abụọ ya ezighi ezi.
AFC Bournemouth na England:
31st nke Jenụwarị 2017 bụ mgbe Aaron Ramsdale hapụrụ Sheffield sonyere Cherries maka ego ruru £ 800,000. Ọ ghọrọ onye otu ndị otu Eddie Howe oge niile - nke nwere kpakpando dịka Nathan Aké, Jordon Ibe, Jack Wilshere, na Mousset Lily.
Ọnwa isii ka e mesịrị-n'ọnwa Ọgọstụ 2016, nne na nna Aaron Ramsdale natara ozi ọma banyere ọkpụkpọ oku nwa ha nwoke U19 England. Ọ ga -anọchite anya England na 2017 UEFA European Championship. Ikpeazụ bụ megide Akwụkwọ Rafael Leao Portugal na Ịngland.
Site n'egwuregwu ise na akwa atọ dị ọcha, ndị otu Aaron Ramsdale meriri asọmpi ahụ. Onye ama ama n'etiti ndị otu mmeri gụnyere aha dị ka - Reece James (Chelsea) Trevoh Chalobah (Chelsea) Ryan Sessegnon na Nkume Mason (Chelsea).
Aaron Ramsdale nyeere England aka ibuli UEFA n'okpuru-19 Championship.
Biography Aaron Ramsdale - Akụkọ ịga nke ọma:
Na ndị ọzọ iji kpokọta ahụmịhe, Eddie Howe kwadoro ịkwaga mbinye ego ya na Chesterfield. Aaron nọrọ oge fọdụrụ na oge 2017–18 ebe ahụ. Mgbe ahụ ọ gara mbinye ego na AFC Wimbledon - klọb nke na -etu ọnụ na ya nwere onye egwuregwu bọọlụ kacha ike n'ụwa - Adebayo Akinfenwa.
Aaron Ramsdale meriri BIG na AFC Wimbledon.
Njikọ nke Premier League:
Mgbe nloghachi si na mbinye ego, Ramsdale guzobere onwe ya dị ka nhọrọ mbụ Bournemouth-maka oge 2019-20. Site na ọtụtụ nzọpụta mmeri egwuregwu, ọ nwetara nkwekọrịta ogologo oge. Na -esote, Goalie na -eto eto meriri onye ọkpụkpọ nke ọnwa na nturu ugo onye ọkpụkpọ 2019.
Enweekwu mmeri na Sheffield United:
Na ọpụpụ nke Dean Henderson, Chris Wilder gara nyocha nke onye na -eche nche ọ nyeburu. Aaron Ramsdale ghọrọ onye ahọpụtara. Oge ahụ hụkwara mkparịta ụka mbufe nke wetara Rhian Brewster gaa na Sheffield.
Agbanyeghị na Blades ọ hụrụ n'anya gbadara site na ọdịda, Aaron Ramsdale ka meere onwe ya aha site na inweta ihe nrite abụọ. Na nkwanye ugwu, Ramsdale meriri nturu ugo Sheffield United Player nke Afọ 2020/2021 - yana nturuugo onye ntorobịa nke afọ.
Nnweta Arsenal na Ọchụchọ iji gosi na ndị na -akwado ya adịghị mma:
Na 20 August 2021, Mikel Arteta si Arsenal kwupụtara na ha nwetara Aaron Ramsdale na nkwekọrịta ogologo oge site na Sheffield United. Mkpebi ahụ - nke Edu mere na ndị otu bọọlụ adaghị nke ọma na ọtụtụ ndị na -akwado Arsenal.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị Fans kwadoro Albert Sambi Lokonga na Nuno tavares'bịanyere aka n'akwụkwọ, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na -akwado Gunners were iwe n'ihi mkpebi klọb ịbanye Ramsdale. Ọbụna Ọ bụ Ben White na -abia na Nke Martin Odegaard dere ntinye na-adịgide adịgide nwetara ọkwa ndị ọzọ.
Maka ọtụtụ ndị na -akwado Gunners, mbinye aka nke onye na -eche nche site na Sheffield United dara ada bụ ego efu. Iji mee ka ihe ka njọ, ọtụtụ ndị egwu chetara mkpebi na -ezighi ezi mbụ ha mere ịre Emiliano Martinez.
Otu ihe doro anya,… Aaron Ramsdale nọ ugbu a na ozi ọhụrụ iji gosi na ndị nwere obi abụọ ezighi ezi. Bernd Leno nwere ike ịlụ ọgụ megide asọmpi Mathew Ryan - onye mgbaru ọsọ mbinye ego mbụ ha. Eleghị anya, Leno nwere ike ọ gaghị adị ndụ na ya na Aaron Ramsdale - ezigbo No1 nke Arsenal.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, hype gbara ya gburugburu nke onye na -eche nche na Arsenal bụ eziokwu. Vidiyo a bụ ntakịrị ihe akaebe na -akọwa ihe kpatara Arsenal ji bịanye aka na Ramsdale. Ndị ọzọ, dị ka anyị na -ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Aaron Ramsdale Ịhụ Ndụ Ndụ - Enyi, Nwunye, Nwa?
Jụọ Emiliano Martinez, ọ ga -agwa gị na ibi ndụ ndụ onye mgbaru ọsọ nke abụọ maka klọb dịka Arsenal siri ike. Agbanyeghị, ịchọta ịhụnanya n'ime usoro a ga - abụ n'ezie - isi iyi nkasi obi.
Aaron Ramsdale Ndụ Ndụ (enyi nwanyị/nwunye) - kọwara.
N'oge edere Aaron Ramsdale's Biography, ọ ka ga -ekpughere onye enyi ya nwanyị. Ndị Fans amaghịkwa nwanyị ọ bụla nke nwere ike ịbụ nwunye ya. Ma eleghị anya, ọ ga -abụrịrị na nne na nna Aaron Ramsdale dụrụ ya ọdụ ka ọ ghara ịnọ n'alụghị nwunye - opekata mpe ugbu a.
Mgbe anyị na -ede Bio a, anyị na -achọpụta - na Erọn na -ebute Caroline - nne ya ụzọ. Site n'ile ihe anya, ọ (ịhụnanya mbụ ya) na -ebu ụzọ ebute enyi nwanyị (opekata mpe ugbu a).
Mama Aaron Ramsdale (Caroline) ga -ewerekwu ịhụnanya ya - na -echere ọbịbịa enyi nwanyị ya.
Ndụ nkeonwe Aaron Ramsdale:
Ndidi, A pụrụ ịtụkwasị obi, onye raara onwe ya nye, onye nwere ọrụ, kwụsie ike na onye nwere ezi ntọala. Okwu ndị a na -akọwa ụdịdị Ramsdale. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nwata nwoke a bụ onye na -apụ apụ na -enwe mmasị na ndụ.
Ọ dịghị ihe na -ama ihu ọchị ọchị nke onye mgbaru ọsọ England. N'ezie, ịmụmụ ọnụ ọchị Ramsdale na -egbu egbu, yana ngwa ọgụ ngwa agha nwoke.
Ndụ Aaron Aaron Ramsdale - A kọwara ya.
Ọzọkwa n'àgwà ya, Aaron Ramsdale nwere akụkụ dị mkpa. Ọ bụghị ihe ọzọ karịa ọchịchọ na -ere ọkụ ọ ga -eme nke ọma - nke na -eme ka ọjụjụ ọ chere ihu dị ka nwata.
Aaron Ramsdale Hobby:
Ihe mbụ na -amasị ya, ọ na -enwe mmasị n'egwuregwu ịgbapụ n'èzí. Nke a bụ egwuregwu n'èzí ebe ndị mmegide na-ekewa onwe ha wee na-ebuso ibe ha agha-na-agbapụ n'ụdị agha.
Ihe ntụrụndụ Aaron Ramsdale. Ọ hụrụ egwuregwu ịgbapụ n'èzí n'anya.
Ndụ Aaron Ramsdale:
N'ime ụwa nke ụgwọ ọrụ buru ibu, ndị egwuregwu bọọlụ bara ọgaranya na ịgba ọkụ, ọtụtụ ndị na -agba ụkwụ na -esetịpụrụ ndị ọzọ ụda. Maka Ramsdale, ibi ụdị ndụ ọ pụtara pụtara inwe ezigbo ụgbọ ala, iyi uwe ka ọ mara nke ọma - nke nwere ọmarịcha onye ya.
Nke a bụ ụgbọ ala Aaron Ramsdale. N'ebe a, ya na enyi ya na -ese foto tupu ọ pụọ maka oge.
Ka ego a na -akwụ ndị na -agba bọọlụ Premier League na -abawanye, otú ahụ ka ịdị adị nke ihe ego ndị ahụ nwere ike ịzụta. Ọmụmaatụ, David de Gea, onye na -akpata £ 375,000 kwa izu yana nde 19.5 GBP, nwere ike ibi ndụ ibi ndụ - nnukwu ụlọ (ụlọ obibi), elekere ọkụ, ụgbọ ala, wdg.
Aaron Ramsdale dị ka Dean Henderson. N'ihe gbasara ego, ọ nọghị n'ọkwa nke ndị na -eche ihe mgbaru ọsọ ụwa - David de Gea, Thibaut Courtois, wdg. Eziokwu ka dị, ọ (ka ọ na -erule 2021) bụ ọgwụ mgbochi ibi ndụ ndụ na -egbu maramara.
A kọwara ụdị ndụ Aaron Ramsdale.
Ndụ Ezinụlọ Aaron Ramsdale:
Goalie na -atụkwasị nne na nna gị na ụmụnne gị obi, ọkachasị mgbe ihe siri ike. Ọzọkwa, Ramsdale bụ nnukwu onye ezinụlọ anaghị enwe agụụ ụlọ. Ugbu a, ka anyị kọọrọ gị gbasara ezinụlọ ya.
Banyere Nna Aaron Ramsdale:
Nick bụ aha ya, ọ so na ndị otu njikwa nwa ya nwoke. Nna nke ụmụ atọ bụ ogidi mmetụta ọdịmma nke Erọn.
N'oge mkpọchi COVID-19, Nick Ramsdale hụrụ na ọ ga-aga n'ihu na mmemme mgbaru ọsọ nwa ya nwoke-ọbụla na-eburu mmerụ ahụ na usoro ahụ. Ọ bụ ihe a na -adịghị ahụkebe ịhụ ka nna na -azụ nwa ya nwoke ma dị njikere ịga n'ihu ọbụlagodi mgbe ọ merụrụ ahụ - n'oge usoro a.
Ọzọkwa ịmara, Nick Ramsdale nyere aka nke ukwuu n'ịhụ na Erọn nwere ezigbo nkwekọrịta na Arsenal. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na -akwado Gunners na -akparị mkpebi klọb ha ịbanye Ramsdale, nna ya (Nick) ghọrọ isi iyi nkasi obi ya. O guzoro n'akụkụ ya. Lee nwoke!
Aaron Ramsdale n'onwe ya kwetara na ọ "nwere ihe ndabara ọma" inwe nna na Nick. Nke a bụ nwoke mụtara mgbatị mgbaru ọsọ n'ihi nwa ya nwoke. Ọ bụzi akụkụ nke mmega ahụ ya na -eme kwa ụbọchị.
Ụbọchị ndị a, ọ na -esiri m ike ịchọta nwoke dịka Nick. Nke a bụ ihe Erọn kwuru gbasara mmetụta Nick nwere n'ọrụ ya.
Ọtụtụ mgbe, papa m hapụrụ ọrụ iji kpọga m n'ọnwụnwa.
Ọzọkwa, agaghị m echefu ihi ụra n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè n'etiti ịga klọb dị iche iche.
Banyere mama Aaron Ramsdale:
N'akụkụ di ya (Nick), Caroline na -ekerekwa òkè n'ihe mgbaru ọsọ nwa ya nwoke - nke na -atọ ya ụtọ. Nke a bụ ihe kpatara nwa ya nwoke ọ hụrụ n'anya (Erọn) anaghị enwe agụụ ụlọ. Ọ bụkwa ya mere o ji akpọ onwe ya dị ka onye ezinụlọ yana, n'ezie, nwa mama.
Ọ bụ n'ezie nwa nne. Ọ na -egosi n'ihu Ramsdale Erọn.
N'oge mkpọchi mkpọchi COVID, Caroline nyeere Nick (di ya) aka ka ọ na -ete ngere iji mepụta ebe mgbaru ọsọ. O mere nke ahụ ka nwa ya nwoke nwee ike zụọ. Nanị n'ime ụbọchị abụọ, Caroline rụchara mgbidi ahụ nile. Ya na Nick mere ihe mgbaru ọsọ - na -agba nwa ha nwoke bọọlụ.
Aaron Ramsdale Ụmụnne:
Dika nyocha nwere ike ịkọ, onye mgbaru ọsọ England nwere ụmụnne abụọ. Nke kacha ochie bụ aha Edward. Nwanne nwoke nke okenye nke ọzọ nwere aha - Oliver. Ugbu a, ka anyị kọọrọ gị ihe karịa banyere ụmụnne Erọn.
Banyere Oliver Ramsdale:
Aha otutu ya bụ Ollie, ọ bụkwa nwanne nwoke okenye nke Erọn. Oliver Ramsdale Ensemble (aha ya zuru oke) bụ onye na -eme ihe nkiri, a zụrụ ya nke ọma site na nka. Foto dị ebe a, nwanne Erọn Ramsdale ozugbo O meela njem nlegharị anya na egwu egwu-unyi unyi.
Oliver (Ollie) Ramsdale na -ejide Cinnamon Pachanga, Lizzie Ottley (n'etiti) ya na Watermelon Margarita na Austin Wilks (n'aka nri) ya na igwe nju oyi swiiti.
Ọ bụrụ na ịmaghị, ịgba egwu ruru unyi bụ Akụkọ Omuma na ogbo - ihe ngosi emere na Wolverhampton's Grand Theatre. A na -enwekarị otuto maka ihe ngosi Oliver. Ọ bụrụ na ị ka na -eche, nke a bụ ihe egwu ịgba egwu dị.
Aaron Ramsdale nwere ezi mmekọrịta ya na nwanne ya nwoke - ọkachasị Oliver. Nke a bụ maka na Oliver etinyela oge ka ya na ndị mụrụ ha nọ. Ọzọkwa ịmara, ụmụ nwoke abụọ ahụ na -enwe mmasị igwu egwu cricket ọnụ n'ogige ezinụlọ ha.
Banyere Edward Ramsdale:
Ọ bụ nwanne nwoke nke okenye Aaron na onye ọrụ ụlọ mkpọrọ site na ọrụ. Edward na -arụsi ọrụ ike na mgbasa ozi mmekọrịta, ọkachasị Twitter - nwere aka @EdwardRamsdale. N'oge oge ọ bụla, ọ na -eme tweet nke na -egosi nkwado maka obere nwanne ya, Aaron.
Mgbe m na-ede Bio a, Edward bi na Newcastle-under-Lyme, England-ikekwe obodo ebe ọ na-arụ ọrụ. Ụmụnne ya nwoke abụọ (Aaron na Oliver) bi na London - dịka nke 2021.
Banyere nne na nna ochie Aaron Ramsdale - Nna nna:
Ị maara?… Papa Nick bụ onye mgbaru ọsọ na -egwuri egwu n'ogo ntorobịa tupu ọ hapụ ọrụ ya. Ewezuga nne na nna Ramsdale, anyị na -achọpụta na nna nna ya achọghị ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba bọọlụ. Erọn kwuru nke a gbasara ya;
Ọ gwara m na m ga -enweta ezigbo ọrụ.
Laa azụ n'oge ahụ - n'oge ya - ego a kwụrụ adịghị mma, ọ nweghịkwa mgbe ọ ga -egwu egwuregwu.
Nna nna m ghọrọ onye na -adịghị akwụ ụgwọ ego.
Nnyocha nwere na nna nna Aaron Ramsdale mechara bụrụ onye nkuzi mgbakọ na mwepụ na emesịa bụrụ onye isi ụlọ akwụkwọ.
Maka Erọn ka ọ gaa n'ihu n'egwuregwu bọọlụ, ya na nna nna ya nwere nkwekọrịta na ọ bụrụ na ọrụ ụlọ akwụkwọ ya adaa, nne na nna ya kwesịrị ịkpọpụ ya na football ruo mgbe ọ ga -emezi akara ule.
Nne nne Aaron Ramsdale:
Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ akwụkwọ gbasara nna nna ya, anyị amachaghị banyere nne nne ya. Foto dị ebe a, ọ dị ka ọ gbasaghị oke mana ọ na -enwe obi ụtọ ịnọnyere Caroline - nne Aaron Ramsdale.
Zute nne nne Aaron Ramsdale.
Aaron Ramsdale Nne:
Mgbe ọ bụ nwata, ọ na -enwe bọl n'aka ya - site n'ikike nwanne nne ya. Ma ọ bụ n'ime ogige ma ọ bụ naanị ibugharị, Aaron Ramsdale ahapụghị bọl bọọlụ ya.
Ọ bụ nwanne nne ya zụrụ bọọlụ ahụ - dị ka onyinye enyere Caroline maka Erọn - n'ụbọchị amụrụ ya. Yiri Marcus Rashford, ọ dị ka ijikọ ya na akara aka ya. Agbanyeghị na nwanne nne ya amatabeghị na nwa nwanne ya ga -abụ onye mgbaru ọsọ ọkachamara.
Nwanne Aaron Ramsdale:
Ọ na -aga n'aha Chris Hemming - ikekwe nne ya. Nwanne nna Aaron Ramsdale bụ onye egwuregwu ezumike nka lara ezumike nka bụ onye na -egwuri egwu Stoke na Hereford otu oge. N'ezie, ọ bụ onye egwuregwu bọọlụ mbụ na ezinụlọ ya.
Eziokwu efu nke Aaron Ramsdale:
Ịchịkọta akụkọ ndụ anyị, anyị ga -eji ngalaba a kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara 6 Go 2 Chesterton Goalkeeper. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Eziokwu #1 - Erọn nna nna Aaron Ramsdale:
Onye mgbaru ọsọ ahụ mere emume mgbe ọ na -ekpughere ya na Arsenal. Ramsdale were ntụ ntụ nna nna ya mbubreyo gaa n'ama egwuregwu Emirate. Mgbe ajụrụ ya ihe kpatara o jiri mee nke ahụ, Goalie kwuru - nna nna ya nwụrụ mgbe nne ya (Caroline) hụrụ na ọ dị ime ya.
N'ihi nke a, ndị mmadụ na -eche na Erọn bụ ịlọ ụwa nke nna nna ya. Ọ ghọrọ nkwenkwe ụgha ka ọ na -etolite - mkpebi ịkpọrọ ntụ nna nna ya ukwu nwụrụ anwụ ebe niile.
Mgbe o mechara ihe ọ na -ewere dị ka emume, onye mgbaru ọsọ ahụ mechiri mbufe nde £ 30 ya na Arsenal.
Eziokwu #2 - Nkịta Ezinụlọ Aaron Ramsdale:
Malite, nne na nna ya na -atụle Labrador ojii dị ka otu n'ime ụmụ ha. Aha nkịta Ramsdale bụ Archie, ọ na -enwekwa omume enyi.
Anyị nwere ihe akaebe nke ahụ. Mama Aaron Ramsdale - na Twitter Biography ya - kwuru na ọ lụrụ Nick (di ya), na ọ bụ nne Archie - nkịta ezinụlọ.
Nke a bụ ihe akaebe na -egosi etu Archie nwere ike isi bụrụ enyi. Na vidiyo a, nna Aaron Ramsdale - Nick nwere ihe ọchị na Black Labrador.
Eziokwu nke atọ: Aaron Ramsdale Tattoos:
Ọ bụ ezie na anaghị ahụ ya anya mgbe ị na -ele ya, Chealton Goalkeeper nwere nka ahụ zoro ezo na nkwonkwo ụkwụ ya. Naanị egbugbu Ramsdale bụ leta 'U' nke na -anọchite anya njikọ dị n'etiti ya na ụmụ nwoke anọ ndị ọzọ - ezigbo ndị enyi ya ochie.
N'otu oge, enwere mmadụ ise n'ime ha guzobere otu - ọnụ na Sheffield United. N'ihi na ha hụrụ onwe ha dịka otu ụmụnne, ụmụ nwoke niile mere egbugbu nke na -egosi ma na -eme ka ọbụbụenyi ha sie ike.
Eziokwu 4: Okpukpe Aaron Ramsdale:
Na -ekpe ikpe site na aha mbụ ya na nke etiti, nsogbu anyị na -akwado ya ịbụ Onye Kraịst. Agbanyeghị, Ramsdale ebughị ibu n'ịkesa ozi gbasara nkwenkwe okpukpe ya na ngalaba ọha. N'ihi ya, ụzọ ndụ Iso Christianityzọ Kraịst dị mkpa nye onye mgbaru ọsọ England.
Tebụl dị n'okpuru na -ekpughe ozi dị nkenke gbasara Aaron Ramsdale. Lelee ya - ka ị ghọta profaịlụ nke Onyenchekwaebumnobi.
AKW WKWỌ WIKI
Aha n'uju: Aaron Christopher Ramsdale
aha otutu: Rams
Ụbọchị ọmụmụ: 14 May 1998
Ndị nne na nna: Nick Ramsdale (Nna) na Caroline Ramsdale (nne)
Ụmụnne: Edward Ramsdale (Nwanne nwoke nke kacha okenye) na Oliver Ramsdale (Nwanne nwoke mere okenye ozugbo)
Ọrụ Nwanne: Edward Ramsdale (onye ọrụ ụlọ mkpọrọ) na Oliver Ramsdale (Onye na -eme ihe nkiri)
Ezinụlọ Ezinụlọ: Obodo Chesterton, United Kingdom
Ogo (ụkwụ na anụ ọhịa): 6 ụkwụ 2 sentimita asatọ OR 1.88 mita.
Education: Ụlọ akwụkwọ sekọndrị Sir Thomas Boughey
Mmụta bọọlụ: Obodo Marsh, Bolton Wanderers na Sheffield United
Net Net (2021): Nde 3 nde
Onye nnọchite anya: Ụwa na Motion
Agbụrụ: Ọcha British
Ọtụtụ ndị egwu Arsenal kpọrọ Aaron Ramsdale aha dị egwu, yie ya egwu - naanị maka klọb ha bịanyere aka na ya na Sheffield dara ada. Ha amataghị - na Erọn na -eme mmetọ ndị a iji mee ka ọ nwee ihe ịga nke ọma. Kemgbe ụbọchị Bolton ya, ịjụ ya emeela ka ndụ ya baa ụba.
N'ịbụ ihe ijuanya ndị nkatọ, onye mgbaru ọsọ ahụ debere mpempe akwụkwọ dị ọcha na egwuregwu mbụ ya megide West Brom - ihe ịrịba ama na ọ ga -abụ Ngụgụ Gunner nke 1. N'inwe nkwenye siri ike, ọ na -achọ ịchụpụ Bernd Leno dị ka No 1 - naanị ụzọ Edouard Mendy chụpụrụ Kepa Arrizabalaga.
Akụkọ ndụ Aaron Ramsdale na-eme ka anyị ghọta ihe ọ pụtara inwe ezinụlọ nwere mmekọrịta chiri anya. Ọ na -akụzikwara anyị - na anyị kwesịrị ịgba mbọ ịga nke ọma - dị ka ihe ọjọọ anyị chọrọ iku ume. Ndị nne na nna Aaron Ramsdale nyeere nwa ha nwoke aka ime nke ahụ.
Daalụ maka iwepụta oge iji gwuo ncheta anyị na akụkọ ndụ nke onye mgbaru ọsọ Stoke-on-Trent mụrụ. Na Lifebogger, anyị na -agba mbọ maka izi ezi n'ọrụ dị kwa ụbọchị nke ịnye akụkọ ndụ nwata Ndị egwuregwu bọọlụ Britain.
Jiri obiọma kpọtụrụ anyị (site na ibe kọntaktị anyị) ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na -adịghị mma na akụkọ ndụ a. N'aka nke ọzọ, biko tinye nkọwa iji nye anyị echiche (s) gị banyere Aaron Ramsdale.